के जनताले माफी माग्दा हुदैन? | MY OPINION:: MY PRIDE :: Rajendra Bishwakarma
के जनताले माफी माग्दा हुदैन?
सेप्टेम्बर 14, 2006 by RAJENDRA BISHWAKARMA
भाद्र २३ गते लमजुङ स्थानेश्वर गाविसको घटनामा दलित् युवा सन्तबहादुर बिश्वकर्मा हत्या काण्डमा सन्तबहादुर निर्दोश रहेको नेपाल मानव अधिकर संगठनको प्रतिवेदनले जगएको छ भने स्वयम् माओवादीहरुले पनि गल्ती स्विकारेका छन् ।
त्यस पछि माओवादीहरुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि सन्तबहादुर बिश्वकर्माको हत्या भुल बश भएको भनि आत्मालोचना गरि सन्तबहादुर परिवारलाई उचित् क्षेतिपूर्ति दिने जनाएको छ। माओवादीले गरेको जुन सुकै काम पनि छुट् हुन्छ? सन्तबहादुरलाई मार्ने व्यक्तिलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेर मात्र पुग्छ? सन्तबहादुरका परिवार आमा, श्रीमती र २ सन्तानको पालन पोषण, शिक्षा दिक्षा गराउने, स्वास्थ्य उपचार गराउने आदि जिम्मा कस्को?
दलित, गरिब, उपेक्षित, किसान जस्ता वर्ग समुदायका लागि हो भनेर ढोल ठोक्दै हिड्ने माओवादीको यस्तो व्यवहार कति उचित अनुचित हो यो सवाल माओवादीलाई छोडौं । तर यो अचम्म लाग्दो कुरा जनताले आफ्नो सोही सत्य कुरा भन्न पनि नपाउने, आफ्नो गल्ति स्विकारेर माफी माग्न पनि नपाउने तर माओवादीले भने जे गरे पनि प्रेस विज्ञप्ती मार्फत आत्मालोचन गर्ने र माफी माग्ने काम गर्न हुने? यस्तो अवस्था कहिलेसम्म?
अर्को आश्चर्यको कुरा
भाद्र २३ गतेको सनसनी पूर्ण अमानविय दलित युवा सन्तबहादुर् बिश्वकर्माको हत्या !
नेपाल सरकरका दलित विकास समिति र राष्ट्रीय दलित आयोग अनि नेपालि दलित गैर सरकारी संघ संस्था र दलित नेताको शुन्य प्रतिकृया !!
← सन्त बहादुरलाई माओवादीले कुटिकुटि मारेको ठहर
दलित महासंघको आपत्ति →
3 thoughts on “के जनताले माफी माग्दा हुदैन?”
Maheswor Shrestha on सेप्टेम्बर 14, 2006 मा 4:41 अपराह्न said:
त्यहि त दु:खको कुरा छ । दलित र जनजातिका नेताहरु माथि पुगे पछि कथित माथिल्लो जात र शासकहरुको जुठोपुरो खान पाए पछि आफ्नो जन्म सफन भएको ठान्छन्, आफ्न जातभाईलाई चटक्कै विर्सि दिन्छन् । बडा धोकेवाज छन् हाम्रा दलित् र जनजाति नेताहरु । हिरालाल विश्वकर्मा, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, गोरेबहादुर खपांगी, गोल्चे सार्की, केजाती चित्रकार परियारको नामले येहि भन्छ ।
अब नयां पुस्ताका युवाहरुले त्यस्ता धोकापूर्ण रबैयालाई पूर्ण रुपले घृणा र बहिस्कार गर्दै अघि बढ्नु पर्छ ।
Maheswor Shrestha on सेप्टेम्बर 14, 2006 मा 4:43 अपराह्न said:
त्यहि त दु:खको कुरा छ । दलित र जनजातिका नेताहरु माथि पुगे पछि कथित माथिल्लो जात र शासकहरुको जुठोपुरो खान पाए पछि आफ्नो जन्म सफल भएको ठान्छन्, आफ्ना जातभाईलाई चटक्कै विर्सि दिन्छन् । बडा धोकेवाज छन् हाम्रा दलित् र जनजाति नेताहरु । हिरालाल विश्वकर्मा, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, गोरेबहादुर खपांगी, गोल्चे सार्की, केजाती चित्रकार परियारको नामले येहि भन्छ ।
Maheswor Shrestha on सेप्टेम्बर 17, 2006 मा 3:50 अपराह्न said:
आजकाल म एउटा नयाँ वेब साइट http://www.westnews.com.np/ हेर्न थालेको छु । हिजो त्यसमा डोटीको शैलेश्वरी मन्दीरमा दलितहरुले प्रवेश पाउने भयो भन्ने समाचार पढेर खुसि भएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै आजै सो मन्दीर प्रवेश गर्न खोज्ने दलितहरु मध्ये ६० भन्दा बढीलाई मन्दीरकै पूजारीको नेतृत्वमा आएको गैरदलितहरुको जत्थाले आक्रमण गरी घाइते तुल्याएको खबर पढ्न पर्दा मन सार्है उद्वेलित भएको छ । लड्नोस् राजेन्द्रजीहरु, किनकि संघर्ष नै जीवन हो । त्यस्ता आक्रमणहरु फेरि फेरि पनि हुन सक्छन् । तर्सथ पहिलो चोटी नै प्रतिकार नगरिए तपाईंहरुको संघर्षले निरन्तरता पाउन लामो समय लाग्ने छ ।
यस ’boutमा एउटा लेख लेख्ने विचारमा छु । केही समय पर्खनोस् ।
तपाईंको इमेल पर्ठाईदिनु भए लेख त्यसैमा पठाइदिने छु ।